लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधको “क्रान्तिकारी” कार्यदिशा | चितवन पोष्ट दैनिक
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधको “क्रान्तिकारी” कार्यदिशा
२०७१ माघ २५, आईतवार ०१:५३ गते
नया“ पत्रिकामा प्रकाशित नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको अन्तर्वार्तामा यो भनाइ प्रकाशित भएको छ ः “उहा“हरु (प्रचण्ड र बाबुराम) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानेर गैहाल्नु भयो । त्यो त मान्नै सकिन्न नि । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छ ? यो त कुनै हालतमा मान्न सकिन्न । यो त चुनवाङकै वैठकमा पनि भनिएको छ । चुनवाङमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेपछि त्यही“बाट बिग्रियो । त्यो एकदम गलत थियो । प्रचण्ड–बाबुराम आफूले त्यही राजनीति लिएपछि अरुलाई दोष दिएर त भएन नि ।”
वैद्यले आफ्नो त्यो भनाइमा दुईवटा कुरा स्पष्टसित राख्नुभएको छ ः प्रथम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उहा“ले “एकदम गलत” बताउनुभएको छ । द्वितीय, चुनवाङको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अपनाउने निर्णय गरेपछि पार्टी “बिग्रियो” । वैद्यको यो अभिव्यक्तिबाट नेकपा–माओवादी संविधानसभा, संविधानको निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेतका विरूद्ध स्पष्ट र दृढतापूर्वक उभिएको कुरा दिनको उज्यालो झै“ छर्लङ्ग छ । उहा“ले गम्भीरतापूर्वक यो प्रश्न उठाउनुभएको छ ः “एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छ ?” त्यो प्रश्नको जवाफमा उहा“ले भन्नुहुन्छ ः “यो त कुनै हालतमा मान्न सकिन्न ।” के उहा“को त्यस प्रकारको सोचाइ साँच्चै क्रान्तिकारी हो ? के यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले सही हो ?
माक्र्सवाद–लेनिनवादले साम्यवाद, समाजवाद र नया“ जनवादी क्रान्तिमा जोड दिन्छ । ती हाम्रा दीर्घकालीन र रणनीतिक कार्यक्रमहरु हुन् । तर, माक्र्सवाद–लेनिनवादले यो कुरामा पनि जोड दिन्छ कि हामीले आफ्ना दीर्घकालीन र रणनीतिक कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै कुनै बेलाको ठोस परिस्थितिअनुसार तात्कालिक कार्यदिशा निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा पार्टीले कतिपय गैरक्रान्तिकारी नीति वा कार्यक्रमलाई पनि पार्टीले अपनाउ“छ । त्यो प्रश्नमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी तथा अराजकता–वादीहरुका बीचमा भएका बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणहरु बुझेपछि त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुनेछ । अराजकता–वादीहरुले खालि क्रान्तिकारी कार्यहरुमा जोड दिन्छन् र बुर्जुवा वा सुधारवादी प्रकारका सबै कार्यनीति वा कार्यहरुको विरोध गर्दछन् । तर, माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरुले कुनै खास वस्तुस्थितिअनुसार तात्कालिक रुपमा पु“जीवादी वा सुधारवादी प्रकारका नीतिहरु पनि अपनाउने गर्दछन् । वैद्यको पु“जीवादी प्रकारको भएकाले संविधानसभा, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने सोचाइले अराजकतावादी सोचाइसित नै मेल खान्छ ।
माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा कयौ“ सुधारवादी प्रकारका कार्यक्रमहरुलाई पनि समावेश गरेका छन् । आठ घन्टा कामको दिनलाई त्यसको एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस प्रकारका सुधारहरुमा जोड दिएकाले बाकुनिनवादीहरुले माक्र्सलाई गद्दार घोषित गरेका थिए । माक्र्सले सामन्ती व्यवस्था भएका देशहरुमा पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोड दिएका थिए । उनले सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पु“जीवादी व्यवस्था प्रगतिशील भएको पनि बताएका छन् । लेनिनले निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा वैधानिक राजतन्त्र र त्योभन्दा बुर्जुवा प्रकारको गणतन्त्रलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले तात्कालिक सुधारका मागहरुका लागि पनि सङ्घर्ष गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । त्यसका लागि लोकवादीहरुले “क्षुद्र युद्ध” मा लागेको भनेर उनको आलोचना गरेका थिए । उनले निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरु या संसदीय प्रणाली पनि तुलनात्मक रुपले प्रगतिशील हुने कुरा बताएका छन् । माओको नया“ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम पनि पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रम अपनाएकाले वाङ मिङले उनलाई गद्दार घोषित गरेका थिए ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने झापाली आन्दोलनका बेलामा उनीहरुले सबै प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक सुधारका लागि चल्ने सङ्घर्षहरुलाई पनि गैरक्रान्तिकारी बताएर अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरुले मोहियानी हकका लागि चल्ने सङ्घर्षलाई समेत गैरक्रान्तिकारी बताएर त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यो निश्चित रुपले अराजकतावादी चिन्तन थियो । गत कालमा विश्वमा वा नेपालमा पनि जुन प्रकारका अराजकतावादी सोचाइ देखा पर्ने गरेका छन्, त्यही प्रकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्ने सोचाइ पनि त्यही प्रकारको सोचाइ हो ।
माओवादीहरुको जोड यो कुरामा छ कि तत्कालका लागि जनसंविधान (पिपुल्स डेमोक्रेसी) वा जनगणतन्त्र (पिपुल्स रिपब्लिक) मा जोड दिने नीति अपनाउनु पर्दछ । सैद्धान्तिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले ती नीतिहरु सही छन् । तर, ती उद्देश्यहरु दीर्घकालीन जनयुद्धको सफलता, जनसत्ताको स्थापना र जनसंविधानको निर्माणपछि नै सफल हुन सक्नेछन् । त्यसरी ती उद्देश्यहरु कार्यनीतिअन्तर्गत होइन, रणनीतिअन्तर्गत आउने विषयहरु हुन् । माओवादीहरुको मुख्य गल्ती यो हो कि उनीहरुले रणनीतिक विषयहरुलाई कार्यनीतिक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरुले लामो समयदेखि संविधानसभा, संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र समेतका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसो गर्दा उनीहरुले कहिल्यै पनि लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई निषेध गरेका छैनन् । त्यसरी माओवादीले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने जुन विचार अगाडि ल्याएका छन्, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सोचाइका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि विरूद्धको कुरा हो । यो साँच्चीकै आश्चर्यको कुरा हो कि वैद्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले मान्न नसकिने कुरा बताएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने विचारले खालि राजावादीहरुलाई मात्र मद्दत पुग्नेछ । राजावादीहरुले यो कुरा बुझेका छन् ः तत्काल जनगणतन्त्रको स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले, वैद्यको त्यो नीतिबाट उनीहरुको प्रतिगामी उद्देश्यमा कुनै बाधा पुग्दैन । अहिलेको उनीहरुको मुख्य विरोध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसित नै छ । माओवादीले त्यसैको विरोध गर्दछन् । त्यसैले, उनीहरुको त्यस प्रकारको नियत नभए पनि माओवादीका नीतिले उनीहरुको (राजावादीहरुको) त्यो राजनीतिलाई सेवा गर्दछ ।
माओवादीहरुले पहिले राजापरस्त नीति अपनाएका थिए । उनीहरुको नीति गैरकाङ्ग्रेस शक्तिहरुसित कार्यगत एकता गर्ने थियो र त्यही नीतिअनुसार उनीहरुले राजासित पनि कार्यगत एकता गरेका थिए । स्वयं माओवादीको नेतृत्वले पनि राजासित छद्म रुपमा कार्यगत एकता भएको कुरालाई स्वीकार गरेका थिए । अर्कातिर, बहुदलीय पक्षधर शक्तिहरुमाथि उनीहरुले आक्रमण गर्ने नीति अपनाएका थिए । चुनवाङ बैठकको मह¤व यो कुरामा छ कि त्यसले उनीहरुको राजापरस्त नीतिलाई छाडेर प्रतिगमन र राजाका विरूद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा बहुदलीय पक्षधर शक्तिहरुसित कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाएका थिए । चुनवाङ बैठकको त्यो निर्णयका आधारमा माओवादी प्रतिगमन वा निरङ्कुश राजतन्त्रविरूद्धको सङ्घर्षमा मह¤वपूर्ण योगदान पु¥यायो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा वैद्यको यो अभिव्यक्तिले अत्यन्त गम्भीर अर्थ राख्दछ ः “चुनवाङमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेपछि त्यही“बाट पार्टी बिग्रियो ।” यसको अर्थ यो हुन्छ ः प्रथम, चुनवाङ बैठकले पहिलेको राजासित कार्यगत एकता गर्ने, बहुदल पक्षधर शक्तिहरुमाथि आक्रमण गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्न हु“दैनथ्यो र द्वितीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा लिन हु“दैनथ्यो । त्यसरी वैद्यको यो स्पष्ट सोचाइ छ ः चुनवाङले त्यस प्रकारको नीति अपनाएपछि नै पार्टी “बिग्रियो” । त्यसरी स्पष्ट रुपमा वैद्यले प्रकट गरेका विचारको निष्कर्ष यो निस्कन्छ ः पार्टीको अहिलेको बिग्रेको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि पार्टीले चुनवाङ बैठकभन्दा पहिलेको नीतिमा फर्कनु पर्दछ । के त्यस प्रकारको सोचाइले नै पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बनाउने छ ? यसबारे वैद्यले गम्भीरतापूर्वक विचार वा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।